Bistort - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Bistort
Bistort ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
bistort ဆေးပင်ကို အကောင်ကိုက်ခြင်း၊ ပျားတုပ်ခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ မြွေကိုက်ခြင်း နှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါများတွင် ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပလိမ်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အစာအိမ်ရောဂါ၊ အူလမ်းကြောင်းမကောင်းသောရောဂါ၊ အူအနာဖြစ်ခြင်း၊ နှင့် ဝမ်းပျက်ခြင်းတို့အတွက်လည်း သောက်သုံးကြသည်။
သုတေသနများသည် interferon-like activity ကို လျော့ချရန် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသနိုင်သော အာနိသင်ကို အတည်ပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် bistort သည် ဟုခေါ်သော အရောင်ကျသော အာနိသင်ရှိသော ဓါတုပစ္စည်းများပါဝင်သောကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်းနှင့် လည်ပင်းယားခြင်းကို သက်သာစေကြောင်းလေ့လာမှု အချို့က တွေ့ရှိထားသည်။
Bistort အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Bistort ကို အသုံးပြုလျှင် ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း ကဲ့သို့သော အူလမ်းကြောင်း လက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်သင့်ပြီး အသည်းကို စစ်ဆေးသော စစ်ဆေးချက်များပြုလုပ်သင့်သည်။
ဆေးဘက်ဝင် အပင်များကို အသုံးပြုသည့် အခါတွင် ဓါတုဆေးဝါးများကို အသုံးပြုသည်ထက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများ နည်းတတ်သည်။ ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လေ့လာမှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုသည်။ ဤဆေးပင်ကို အသုံးပြုရာတွင် အန္တရာယ်ရှိနိင်သည် ဆိုသည်ကို သတိပြုရမည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bistort က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
သုတေသနများ မပြုလုပ်ရသေးခင်ထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၊ နှင့် နို့တိုက်မိခင်များတွင် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
Bistort ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဤဆေးပင်ကို အသုံးပြုလျှင် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကို လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် အသည်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆေးပင်ကိုအသုံးပြုသော လူတိုင်း ထိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော် အခြားသော ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနေနိင်သည်။ အကယ်၍ အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိတ်ပူပါက သင်၏ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Bistort ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် အခြားသော သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကို ပါးစပ်မှ သောက်လျှင် အချို့ဆေးများ၏ အာနိသင်ကို ပိုစေသောကြောင့် အချိန်ခြားပြီးမှ သောက်သင့်သည်။
Bistort အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အမြစ်မှုန့် ၁ ဇွန်းကို ၂၃၇ မီလီလီတာရေနွေးဆူဆူထဲတွင်ထည့်ပြီး တစ်နေ့လျှင် သုံးကြိမ်သောက်ပါ။ အမှုန့်ကို ရေထဲတွင် ဖျော်ပြီး လိမ်းလိုသောနေရာကို လိမ်းနိုင်သည်။
ဤဆေးပင်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသော ပမာဏမှာ လူနာတစ်ယောက်ချင်းစီတွင် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ သောက်ရမည့် ပမာဏသည် လူနာ၏ အသက်၊ ကျန်းမာရေး၊ နှင့် အခြားသော အခြေအနေများတွင် မူတည်ပါသည်။ ဘယဆေးပင်များသည် အမြဲတမ်း စိတ်မချရပါ။ ထို့ကြောင့် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် သင့်တော်သောပမာဏကို ဆွေးနွေးပါ။
Bistort က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဤဆေးပင်ကို အောက်ပါ ပုံစံများနှင့် ရနိုင်သည်။
• အမြစ် (အခြောက်နှင့် အစို)
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 75.
Bistort. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 75-bistort.aspx?activeingredientid=75&activeingredientname=bistort. Assessed August 6, 2016.
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကျန်းမာရေးအားလုံး
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း
အလေ့ကျပေါက်တဲ့ သကြားသီးလေးက ဒီလိုဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်
ဝမ်းထဲ သွေးပါခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းများ ။ ။